eUpper Mjika, Eskolweni
Eskolweni noko abantu abavela apha banoba bafundile
ize leUpper ne Lower Mjika yahlulahlulwe kwilali ngelali - Mna ndizakukuxelela nge Upper Mjika ngoba ndiyayazi. iQala Pesheya konyembezi, ibe KuNqumama, eSikhulu, iMfabantu, eSikolweni, eMthonyameni. Kukholo imifula emikhulu - iQala kuMthatha, ukuya kuSqhuzana, uNyembezi, uZagwityi, uMkrucu, uMvubo neminye ke.
Indlela bayilungisile ngoku - kunegrabile ngoku ke ngeke uhlupheke xa usiya khona. Xa unoluhambo oluya eUpper Mjika xa usuka ngaseNcise udlula kwihlathi elikhulu elibizwa ngokuba nguKhambi. Lelali inemizi ngemizi uninzi lwayo ngoMaduna, kuyaviwana ke. Kunendindi ngendidi zecawe apho wonke umntu amkelekileyo. Isininzi sabantu baphila ngokufuya iNkomo nezinye ke izilwanyana ezinje ngegusha, bhokhwe, hagu njalonjalo, iphimbe babengabalimi. Yilali yase Upper Mjika ke leyo.
Abantu balelali kakhulu baphila ngokufuya izilwanyane ezinje ngenkomo, igusha, ibhokhwe, inkukhu - abanye ke bazithengise xa ngaba bafuna ubutiki obuthile. Abanye ke basebenza eGoli naseKapa nakwezinye idolophu zoMsantsi Afrika. Bayabuya ke ngamaxesha eholiday nangeKrismesi.
Amaxhosa ke anamasiko amaninzi olunye lamasiko esiXhosa xa kusoluswa amakhwenke eza kungena ebudodeni. Yinto enkulu ke leyo eSixhoseni - iphantse ifane nomtshato. Uye ke asokwe umntu omtsha ngento ezininzi ezifana nempahla emfitshane, impahla yokunxiba, imali njalo njalo. Lomsebenzi ke uthanda ukwenziwa ngenyanga zasebusika ezinje ngeyeSilimela neyeKhala noba nge kodwa kenangenyanga Yomnga kuyelukwa.